18 O wee malite inye ha otu ihe atụ banyere mkpa ọ dị ka ha na-ekpe ekpere mgbe niile ma ghara ịda mbà,+
2 o wee sị: “N’otu obodo, e nwere otu ọkàikpe nke na-adịghị atụ egwu Chineke, nke na-adịghịkwa akwanyere mmadụ ùgwù.
3 Ma e nwere otu nwaanyị di ya nwụrụ n’obodo ahụ, ọ nọgidekwara na-agakwuru+ ọkàikpe ahụ, na-asị, ‘Hụ na m nwetara ikpe ziri ezi n’ikpe mụ na onye iro m.’
4 O kweghịkwa ná mmalite, ma e mesịa ọ gwara onwe ya, sị, ‘Ọ bụ ezie na adịghị m atụ egwu Chineke ma ọ bụ na-akwanyere mmadụ ùgwù,
5 ka o sina dị, n’ihi nsogbu nwaanyị a di ya nwụrụ na-enye m mgbe niile,+ m ga-ahụ na o nwetara ikpe ziri ezi, ka o wee ghara ịnọgide na-abịa enyegbu m ná nsogbu.’”+
6 Onyenwe anyị wee sị: “Nụrụnụ ihe ọkàikpe ahụ kwuru, ọ bụ ezie na ọ bụ onye ajọ omume!
7 Ya mere, ọ̀ bụ na Chineke agaghị eme ka ndị ọ họọrọ, bụ́ ndị na-etiku ya ehihie na abalị, nweta ikpe ziri ezi,+ ọ bụ ezie na ọ na-enwe ogologo ntachi obi+ n’ihi ha?
8 Ana m asị unu, Ọ ga-eme ka ha nweta ikpe ziri ezi ọsọ ọsọ.+ Otú o sina dị, mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịarute, ọ̀ ga-ahụ okwukwe n’elu ụwa?”
9 Ma o nyekwara ụfọdụ ndị ihe atụ a, bụ́ ndị tụkwasịrị onwe ha obi na ha bụ ndị ezi omume,+ ndị na-ewerekwa ndị ọzọ dị ka ndị na-enweghị ihe ha bụ, sị:+
10 “Ndị ikom abụọ gbagoro n’ụlọ nsọ ikpe ekpere, otu bụ onye Farisii, nke ọzọ bụ onye ọnaụtụ.
11 Onye Farisii ahụ guzoro ọtọ+ wee malite ikpe ekpere+ n’obi ya, sị, ‘Chineke, ana m ekele gị na adịghị m ka ụmụ mmadụ ndị ọzọ, bụ́ ndị na-apụnara mmadụ ihe, ndị ajọ omume, ndị na-akwa iko ma ọ bụ ọbụna dị ka onye ọnaụtụ a.+
12 Ana m ebu ọnụ ugboro abụọ n’izu, ana m enye otu ụzọ n’ụzọ iri nke ihe niile m nwetara.’+
13 Ma onye ọnaụtụ ahụ guzo n’ebe dị anya, ọ chọghị ọbụna ileli anya ya lee eluigwe, kama ọ nọ na-eti aka n’obi,+ na-asị, ‘Chineke, meere mụ onwe m bụ́ onye mmehie amara.’+
14 Ana m asị unu, Nwoke a laruru n’ụlọ ya wee bụrụ onye ezi omume+ karịa nwoke ahụ; n’ihi na onye ọ bụla nke na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala, ma onye na-eweda onwe ya ala, a ga-ebuli ya elu.”+
15 Ndị mmadụ wee malite ịkpọtara ya obere ụmụaka ha ka o bitụ ha aka; ma mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ nke a, ha malitere ịbara ha mba.+
16 Otú ọ dị, Jizọs kpọrọ ụmụntakịrị ka ha bịakwute ya, sị: “Hapụnụ ụmụntakịrị ka ha bịakwute m, unu anwakwala igbochi ha. N’ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otú ahụ.+
17 N’ezie, ana m asị unu, Onye ọ bụla nke na-anabataghị alaeze Chineke dị ka nwatakịrị agaghị aba n’ime ya ma ọlị.”+
18 Otu onye na-achị achị wee jụọ ya, sị: “Ezi Onye Ozizi, gịnị ka m ga-eme ka m wee keta ndụ ebighị ebi?”+
19 Jizọs sịrị ya: “Gịnị mere i ji akpọ m ezi onye? Ọ dịghị onye bụ́ ezi onye, ma e wezụga otu onye, ya bụ, Chineke.+
20 Ị manụ ihe ndị e nyere n’iwu,+ ‘Akwala iko,+ Egbula ọchụ,+ Ezula ohi,+ Agbala akaebe ụgha,+ Sọpụrụ nna gị na nne gị.’”+
21 O wee sị: “M na-edebe ihe a niile kemgbe m bụ nwata.”+
22 Mgbe Jizọs nụrụ ihe o kwuru, ọ sịrị ya: “Ọ dị otu ihe ị ka ga-eme: Ree ihe niile i nwere kesaara ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ̀ n’eluigwe; bịakwa bụrụ onye na-eso ụzọ m.”+
23 Mgbe ọ nụrụ ihe a, o wutere ya nke ukwuu, n’ihi na ọ bara ọgaranya nke ukwuu.+
24 Jizọs lere ya anya wee sị: “Lee ka ọ ga-esi siere ndị nwere ego ike ịba n’alaeze Chineke!+
25 N’eziokwu, ọ dịịrị kamel mfe isi n’anya agịga e ji akwa ákwà gafere karịa ọgaranya ịba n’alaeze Chineke.”+
26 Ndị nụrụ ihe a sịrị: “Ònyezi ka a pụrụ ịzọpụta?”
27 O wee sị: “Ihe na-ekweghị omume n’ebe ụmụ mmadụ nọ kwere omume n’ebe Chineke nọ.”+
28 Ma Pita sịrị: “Lee! Anyị ahapụwo ihe niile anyị nwere soro gị.”+
29 O wee sị ha: “N’ezie, ana m asị unu, Ọ dịghị onye hapụrụ ụlọ ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ ụmụnne ndị ikom ma ọ bụ nne na nna ma ọ bụ ụmụ n’ihi alaeze Chineke,+
30 bụ́ onye na-agaghị enweta ihe ka ya okpukpu okpukpu n’oge a, nwetakwa ndụ ebighị ebi n’ime usoro ihe na-abịanụ.”+
31 O wee kpọpụ mmadụ iri na abụọ ahụ n’akụkụ wee sị ha: “Lee! Anyị na-agbago Jeruselem, a ga-emezukwa ihe niile e dere site n’aka ndị amụma+ banyere Nwa nke mmadụ.+
32 Dị ka ihe atụ, a ga-enyefe ya n’aka ndị mba ọzọ, a ga-ejikwa ya mee ihe ọchị+ ma mee ya ihe ihere,+ gbụọkwa ya ọnụ mmiri;+
33 ha pịasịakwa ya ihe,+ ha ga-egbu+ ya, ma n’ụbọchị nke atọ, ọ ga-ebili.”+
34 Otú ọ dị, ha aghọtaghị ihe nke ọ bụla n’ime ihe ndị a pụtara; kama e zochiiri ha okwu a, ha aghọtaghịkwa ihe ndị e kwuru.+
35 Ma ka ọ na-eru Jeriko nso, otu onye ìsì nọ ọdụ n’akụkụ okporo ụzọ na-arịọ arịrịọ.+
36 N’ihi na ọ nụrụ ka ìgwè mmadụ na-agafe, ọ malitere ịjụ ase ihe nke a pụtara.
37 Ha kọọrọ ya, sị: “Jizọs onye Nazaret na-agafe!”+
38 O wee tie mkpu, sị: “Jizọs, Nwa Devid, meere m ebere!”+
39 Ndị bu ụzọ wee malite ịgwasi ya ike ka o mechie ọnụ, ma ọ nọ na-etisikwu mkpu ike, sị: “Nwa Devid, meere m ebere.”+
40 Jizọs wee guzoro otu ebe ma nye iwu ka e dutere ya nwoke ahụ.+ Mgbe o rutere nso, Jizọs jụrụ ya, sị:
41 “Gịnị ka ị chọrọ ka m meere gị?”+ O wee sị: “Onyenwe anyị, mee ka m hụwa ụzọ.”+
42 Ya mere, Jizọs sịrị ya: “Hụwa ụzọ; okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma.”+
43 O wee hụwa ụzọ n’otu ntabi anya,+ ọ malitekwara iso ya, na-enye Chineke otuto.+ Mgbe ndị ahụ niile hụrụ ya, ha nyere Chineke otuto.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D42%26Chapter%3D18%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl